TTSweet: ဆစ်ဒနီမှာ အိမ်ဝယ်မယ်ဆိုရင် ... (၁)
ကောင်းထက် February 3, 2012 at 8:38 PM
သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီနှင့် မဲလ်ဘုန်းမြို့ ဘယ်မြို့က မြန်မာလူမျိုးများအတွက် နေထိုင်ဖို့ အဆင်ပြေသလဲဆိုတာ အကြံဥာန်တောင်းခံပါတယ်ခင်ဗျား။ ရာသီဥတု စရိတ်စက လခ၀င်ငွေ ကလေးတွေပညာရေး အဖက်ဖက်က ကြည့်ပြီးဘယ်ဟာသင့်တော်မလဲဆိုတာ မဆုံးဖြတ်တတ်လို့ပါခင်ဗျာ။ လောလောဆယ်တော့ စလုံးမှာနေပါတယ်။ အော်စီကို နောက်နှစ်မှာ ပြောင်းဖို့အစီအစဉ်လုပ်ထားလို့ပါ။ နောက် ဆစ်ဒနီ မဲလ်ဘုန်းက အိမ်ဈေး normal range လေးတစ်ချက်လောက် ပြောပြပေးဖို့ မေတာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ လေးစားစွာဖြင့်
mgchaint February 5, 2012 at 4:47 AM
မေးတဲ့ မေးခွန်းက ရိုးရိုးလေးပေမဲ့ ဘောင်ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ ဆစ်ဒနီ နဲ့ မဲလ်ဘုန်း မြို့နှစ်ခုမှာ မြန်မာအတွက် ဘယ်ဟာက အဆင်ပြေသလဲဆိုတာ ဖြေဖို့ အလွန်ခက်ပါတယ်။ အရိုးအရှင်းဆုံး ဖြေပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိအလုပ်အဆင်ပြေတဲ့ နေရာက မိမိအတွက် အဆင်ပြေဆုံးပါပဲ။ စာရင်းဇယား တိတိကျကျ လေ့လာထားတာ မဟုတ်ပေမဲ့ ပါးစပ်အပြောအရ မြန်မာတော်တော်များများ ဆစ်ဒနီမှာ နေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မဲလ်ဘုန်း မှာ ဆရာဝန်တွေ အနေများတယ်လို့လဲ ဆိုကြပါတယ်။
ရာသီဥတုအနေနဲ့ မဲလ်ဘုန်းမှာမနေဘူးတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်း ဘက်လိုက်ပြီးပြောရရင် ကျွန်တော်ကတော့ ဆစ်ဒနီက ရာသီဥတုပိုကောင်းတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ်နေတဲ့ နေရာမိုလို့လဲ ပါဝင်ပါတယ်။
လခ၀င်ငွေက ကိုယ်ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နဲ့ ပိုဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ဆစ်ဒနီမှာ ကုန်ကျငွေ ပိုကုန်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ တခြားအရပ်တွေထက် ဈေးအနည်းငယ်များတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အဓိကအနေနဲ့ကတော့ ၀င်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေ မျှတအောင် သုံးစွဲနိုင်ဖို့ပါ။ အော်စီမှာ စီးပွားရေး လုပ်တာမဟုတ်ပဲ အလုပ်လုပ်ကိုင်တယ်ဆိုရင် သူဌေးတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်း အနေအထိုင် စီစစ်မယ်ဆိုရင် နေထိုင်ရတာ ၀င်ငွေ ထွက်ငွေ မျှတပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကလပ်မတက် စားသောက်ဆိုင် နေ့တိုင်းသွားစားတာ မျိုး မဟုတ်တဲ့ အတွက် အပိုကုန်ငွေ မျိုး မရှိသလောက်ပါပဲ။ လူငယ်သဘာဝ ကလပ်တွေတက်မယ်။ စားသောက်ဆိုင်မှာ စားမယ်ဆိုရင်တော့ မလောက်ငှဘူးလို့ ထင်တယ်။ အော်စီမှာ အိမ်မှာ ချက်စားကြတာ များပါတယ်။
အိမ်ဈေးအနေနဲ့ ဆစ်ဒနီမှာတောင်မှ Suburb အလိုက် ဈေးက ကွာပါတယ်။ မီလီယန် ချီ ရှိတဲ့ အိမ်နဲ့ ၃ သိန်းခန့် ရှိတဲ့ အိမ်။ အိမ်ခန်း စသဖြင့် ရှိတတ်ပါတယ်။ realestate.com.au နဲ့ domain.com.au မှာ ဈေးနှုန်းတွေ အိပ်ခန်း အလိုက် ဈေးတွေ ရှိပါတယ်။ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
ကောင်းထက် February 5, 2012 at 2:54 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုမောင်ခြိမ့်ခင်ဗျား။ အမှန်ပြောရရင် ကျွန်တော့်ပရိုဖက်ရှင်နယ်က ဆစ်ဒနီ မဲလ်ဘုန်း ပက်ဖ် မြို့တွေမှာ အလုပ်ပေါပါတယ်။ အရင်ကစလုံးမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ကုန်ပနီက ပက်ဖ်မှာ၇ုံးထိုင်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ဆစ်ဒနီနဲ့ မဲလ်ဘုန်းနှစ်မြို့ကို ပိုကြိုက်လို့ပါ။ အဲဒါကြောင့်လဲ ဝေခွဲမရဖြစ်နေတာပါ။ ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးလဲ အော်စီရောက်ရင် စလုံးမှာလို အလုပ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကလေးတစ်ဖက် အိမ်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဘဲ အချိန်ကုန်ရတော့မှာပါ။ အဲဒါကြောင့် ကြိုတင်စုံစမ်းထားတဲ့သဘောပါခင်ဗျာ။ ပြောင်းဖြစ်ဖို့ အချိန်တစ်နှစ်နီးပါးလောက် လိုသေးတာကြောင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ထပ်မံလေ့လာအချိန်ယူ ဆုံးဖြတ်နိုင်သေးတယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ အခုလို အချိန်ကုန် တကူးတက ဖြေကြားပေးလို့ ကျေးဇူးအရမ်းတင်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုမောင်ခြိမ့်ရေေုသ်ာဇီမှာ နိုင်ငံခြားသားများ အိမ်မြေ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါသလားခင်ဗျား။
mgchaint February 6, 2012 at 9:35 AM
၇ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အော်စီအနေနဲ့ တွက်မယ်ဆို၇င် နိုင်ငံခြားသားပါပဲ။ နိုင်ငံခြားသားလို့ ဆို၇ာမှာ ပီအာသို့မဟုတ် ၇က်ပေါင်း ၂ဝဝ ထက် အထက် နေတဲ့ သူနဲ့။ ပီအာလဲ မဟုတ် ဘာမှ မဟုတ်ပဲ အိမ်ဝယ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားဆိုပြီး သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ပီအာမဟုတ်၇င်တော့ အော်စီ၇ဲ့ တချိူ့သော အကျိူးခံစားခွင့်များ မ၇၇ှိပါဘူး။ ၇င်းနှီးမြုပ်နှံမှူအတွက် အိမ်ဝယ်လို့၇ပါတယ်။ အတိ်ုးဈေးနှူန်းမတူညီပါ။
mgchaint February 6, 2012 at 9:45 AM
These categories can buy property in Ausi
an approved migrant,
a foreign national holdingapermanent visa
a person who is entitled to permanent residence status in Australia
a citizen of New Zealand.
Apart from those, Ausi Gov considered as Foreigner and they have to apply to Foreign invenstment Review Board to get permission to buy.
မှန်ပါတယ်။ဝယ်မယ်ဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်နှင့်မဆိုင်ပါ။သြဇီနိုင်ငံသား သို့မဟုတ်နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်သြဇီ PRမှလွဲ၍အခြားသူများနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘုတ်အဖွဲ့မှခွင့်ပြုမှဝယ်လို့ရပါမယ်။ထိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးနေထိုင်ခွင့်လုံးဝမပေးပါ။နေထိုင်ခွင့်နှင့်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုသီးခြားသတ်မှတ်ပါသည်။မြန်မာစာအုပ်ကိုင်ပြီးသြဇီPR ပင်မရသေးသူတဦးဝယ်ခွင့်ရ၍အိမ်ဝယ်လျင်အဝေးကငေးကြည့်ကာမသိနားမလည်သူများကိုသြဇီတွင်အိမ်ပိုင်ကြောင်းကြွားနေရုံသာရှိမည်ဖြစ်ပြီးမြင်သာမြင်မကြင်ရသောဘဝသာရှိမည်ဖြစ်သည်။ဗဟုသုတပါ။